Actorylọ ọrụ ngwaahịa Stone - China Ndị na-emepụta ngwaahịa Stone, ndị na-eweta ya
• Mere site na konkiri maka ịke na ogologo ya
• dị mma maka paịlị pestos, cinnamon, cloves, nuts na ndị ọzọ
• Granite gbara ọchịchịrị na-ejikọta ihe osise nke rustic-chic na arụmọrụ siri ike
• Elu ala dị n'ime ụlọ arụpụtara maka njikarịcha arụmọrụ na ngwakọta akọrọ na mmiri mmiri.
Mkpụrụ pịrịkụl nwere akụkụ na-enweghị akwụkwọ maka arụ ọrụ
Ma okwuru ma obu konkiri osisi choputara
Zuru oke maka ịkpụ ma ọ bụ jeere ụdị nri niile.
• mfe ihicha.
• ahaziri etu esi edozie ya.
• kọntaktị nri na-adịghị ize ndụ ma anyị nwere akụkọ LFGB na FDA.
Nkọwapụta Ngwaahịa: WB 259 Ihe: okike okike nke okike: Dia.14cm, Ogo 10cm akwakọbaara: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Nkọwapụta ngwaahịa: Ejiri site na klọọkụ maka ụdị na ịdịtere ya dị mma maka egwe pestos, cinnamon, cloves, nuts na ndị ọzọ ọchịchịrị Granite na-ejikọta ihe oyiyi nke rustic-chic na arụmọrụ siri ike Ime elu dị n'ime ụlọ arụpụtara maka njikarịcha arụmọrụ na ngwakọta akọrọ na mmiri mmiri. Mkpụrụ pịrịkụl nwere akụkụ na-enweghị akwụkwọ maka arụ ọrụ
Ihe Ego Ahia: WB 223 Ihe: okike okike nke ala: W: 13CM, H: 9CM akpa: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Nkọwapụta ngwaahịa: E sitere na granite maka ụdị na ịdịte aka dị mma maka ịkpụ pestos, cinnamon, cloves, nuts na ọzọ ọchịchịrị Granite na-ejikọta Ihe eji eme ihe dikwa elu elu ulo nke edobere maka ike ime ihe n’otutu eji akuko ma udu mmiri. Mkpụrụ pịrịkụl nwere akụkụ na-enweghị akwụkwọ maka arụ ọrụ
Ihe Ego Ahia: WB 226 Ihe: okike okike nke ala: Dia.14.5cm, Ogo 10cm Dia.17cm, Elu 12cm Dia.20cm, Ogologo 14cm na-eburu igbe: onyinye onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja nkọwapụta: Ejiri site na granite maka ụdị na ịdịte aka dị mma maka egweri. pestos, cinnamon, cloves, nuts na ndị ọzọ ọchịchịrị Granite na-ejikọta ihe oyiyi nke rustic-chic na arụmọrụ siri ike n'ime ime nke edepụtara maka njikarịcha nke ọma na ngwakọta akọrọ na mmiri mmiri. Mkpụrụ pịrịkụl nwere akụkụ na-enweghị akwụkwọ maka arụ ọrụ